စကားဝိုင်းများ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label စကားဝိုင်းများ. Show all posts
မြန်မာ အစိုးရက ဒုတိယ အကြိမ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ ကျင်းပဖို့ ကြိုးပမ်း aနတဲ့ တချိန် တည်းမှာပဲ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေ ပါတယ်။
လတ်တလော တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမယ့် အစီအစဉ်တွေကို ဘယ်လောက်အထိ ရိုက်ခတ် လာနိုင်ပါသလဲ?
မကြာခင် ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကနေ ဘာတွေ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို ဗွီအိုအေရဲ့ စနေနေ့ည တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ်မှာ ကိုအောင်လွင်ဦး က ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (ကိုအောင်လွင်ဦး)
ကဏ္ဍ စကားဝိုင်းများ, အသံဖိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသားများ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်း (ရုပ်သံ)
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပင်လုံမြို့မှာ ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ နှစ် ၇၀ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်း အနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်း အနား အစီအစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ၁၂ ဦးတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း အပြည့်အစုံ ရုပ်သံကြည့်ရှုရန်
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/189020
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, စကားဝိုင်းများ, ပြည်တွင်းသတင်း
လိုင်းကား ယာဉ်မောင်းနဲ့ စပါယ်ယာတွေ ယဉ်ကျေးပြီး စည်းကမ်းရှိဖို့ ဝိုင်းဝန်း ပညာပေးဖို့ လို
ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့ မှုတွေနဲ့ နေ့စဉ် ဆိုသလို ရုန်းကန် လှုပ်ရှား နေရတဲ့ ရန်ကုန် မြို့ကြီးမှာ အများပြည်သူ စီးနင်းနေ ကြရတဲ့ ဘတ်စ်ကား လိုင်းတွေရဲ့ တချို့ ယာဉ်မောင်း
တွေနဲ့၊ စပယ်ရာ အကူ လက်ထောက် တွေဟာ လမ်းစည်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာ ရုံတင်မက၊ ယာဉ်စီး သူတွေ၊ လမ်းသွား လမ်းလာတွေ၊ တခြား မော်တော်ယာဉ်
တွေကို မိုက်မိုက် ရိုင်းရိုင်း အော်ဟစ်ငေါက်ငမ်း တာတွေ လုပ်နေကြတဲ့ အပြင်၊ မင်းမဲ့ စရိုက် ဆန်ဆန် ဒုတ်တပျက် ဓါးတပျက်၊ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားတဲ့ အဖြစ်
တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေ ကြရပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ဘယ်လို ပညာပေး မှုတွေနဲ့ ကာကွယ် တားဆီးကြရင် ကောင်းပါမလဲ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ဥပဒေဘောင် အတွင်းက ဘယ်လိုပြုပြင် ပေးကြရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာတွေကို လူထု နီတိ တရား ပြောကြားပေးတဲ့ သက်ကြီး ဝါကြီး စာရေး ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို ၊ လူထု ခံစားချက်တွေကို ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဖော် ပေးနေတဲ့ ကာတွန်းဆရာ မောင်မောင် ဖောင်တိန်၊ လူထု ကိုယ်စား ပြောကြား ပေးတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အများပြည်သူသုံး ယာဉ်လိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် ဗဟုသုတ မျှဝေပေးတဲ့ နယူးယောက်မြို့ခံ ကိုဇော်လင်းကျော်၊ စင်ကာပူက ကိုနေဦးလင်း နဲ့ ရန်ကုန် မြို့ခံ ကိုဇော်ဖြိုးလင်းတို့နဲ့ အတူ သောတရှင်တွေ ပေးပို့လာတဲ့ အကြံပြု စာတွေနဲ့ အပြုသဘော သုံးသပ် ဆွေးနွေး ထားကြတာ နားဆင်ပါရှင်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by : (ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 11, 2016 No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ၊ Eleven Media Group နဲ့ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)
Eleven Media Group က အမှုဆောင် အရာရှိ ချုပ်နဲ့ အယ်ဒီတာ ချုပ်တို့ကို ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသ ကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က တရားစွဲ ထားတဲ့ အပေါ် မတူ ကွဲပြားတဲ့ သဘောထား အမြင်တွေ ရှိနေ ကြပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက် တာမှာ မရှိသင့်ဘူးလို့ ပြောကြတဲ့ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကိုသုံးပြီး ဖမ်းဆီး တရားစွဲတဲ့ အပေါ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ ကို ဝေဖန် သူတွေ ရှိသလို တာဝန်ရှိ သူတွေ လာဘ်စားတယ် ဆိုပြီး တိကျ သေချာမှု မရှိဘဲ စွပ်စွဲ ရေးသား တဲ့အပေါ် ဝေဖန် သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပင်တိုင် ဆွေးနွေး သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မန္တလေး အခြေစိုက် စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာ ဦးကျော်ရင်မြင့်၊ မြန်မာ သတင်း ပညာသိပ္ပံ သင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်ဝင်းတို့နဲ့ အတူ သောတရှင်တွေ ပါဝင် ဆွေးနွေး ထားကြ ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by : (ကျော်ကျော်သိန်း)
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Wednesday, November 16, 2016 No comments:
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒသစ် မြန်မာအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိမလဲ ?
အမေရိကန် ရွေးကောက်ခံ သမ္မတ Donald Trump နဲ့ ဒုသမ္မတ Mike Pence။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြို့တော်၊ သမ္မတ ရုံးစိုက်ရာ ဝါရှင်တန် ဒီစီနဲ့ လည်း မနီးစပ်၊ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်က ဝါရင့် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးလည်း မဟုတ် တဲ့သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ နဲ့လည်း တစိမ်း သက်သက် အလှမ်းဝေး တဲ့သူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တယောက် အမေရိကန် သမ္မတ အဖြစ် အရွေးခံ ရပြီဆိုတော့ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အပေါ် ဘယ်လို အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်သလဲ ဆိုတာတွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အမေရိကန် နိုင်ငံရေး လေ့လာ အကဲခတ် နေတဲ့ ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ၊ နိုင်ငံရေး အကဲခတ် ဦးအောင်သူငြိမ်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းက ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမြအေးတို့နဲ့ အတူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက ဗွီအိုအေ သောတရှင် တွေနဲ့ ဆွေးနွေး ထားတာ နားဆင်ပါ။
ကဏ္ဍ စကားဝိုင်းများ, မြန်မာရေးရာ, အသံဖိုင်
ရန်ကုန်မြို့ ဈေးတစ်ခု မြင်ကွင်း။ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅။
ဗွီအိုအေရဲ့ သောတရှင် များရှင်
အခုတလော မြန်မာပြည်မှာ အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မတန်တဆ တက်နေ တာဟာ ရောင်းလို အားနဲ့ ဝယ်လိုအား မမျှတ တာကြောင့်လား၊
ငွေကြေး ဖေါင်းပွမှု ကြောင့်လား၊
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် စကားအရ ဝိသမ လောဘ သမားတွေရဲ့ အမြတ်ကြီးစား မှုတွေကြောင့် များလား
စတဲ့ မေးခွန်း ထုတ်မှုတွေနဲ့ အတူ
ပြည်သူတွေ ဘဝ ချောင်လည်စေဖို့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး အတွက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြရင် ကောင်းမလဲ
စတာတွေကို စနေည တိုက်ရိုက် လေလှိုင်း အစီအစဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒဂုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ သက်သက်ခိုင် ၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေး လေ့လာ အကဲခတ်နေတဲ့ စာရေးဆရာ အောင်ချိန်ဘွား ခေါ် ဦးလှမောင် ၊ ရန်ကုန်မြို့က ဒေါ်ခင်မျိုးဆွေ အပါ အဝင် ဗွီအိုအေရဲ့ သောတရှင်များနဲ့ အတူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက သုံးသပ် ဆွေးနွေး ထားကြတာ နားဆင်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, November 06, 2016 No comments:
ခရိုနီ၊ အစိုးရသစ်နဲ့ ဖွံဖြိုးရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြား
မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် ရည်စူးတဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖွံဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များ တွေ့ဆုံပွဲမှာ - အရင် စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့ ခရိုနီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖိတ်ကြား ခဲ့သလို၊ သူတို့ကို ရှေ့ဆက် ဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အစိုးရကို ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဖို့
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံက ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပါတယ်။
ခရိုနီစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အစိုးရသစ် အကြား အခုလို နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံလာမှု အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေလည်း ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။
အရင်စစ်အစိုးရလက်အောက် အမည်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ အစိုးရသစ်ရဲ့အောက် နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားဖွံဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွေမှာ တကယ်ပဲ အသုံးတည့်မယ် အသုံးဝင်မယ် အများအကျိုးဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါသလား။
လာမယ့် အင်္ဂါနေ့ညတိုက်ရိုက်လေလှိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ISP မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့က သုတေသီ ဦးအောင်သူငြိမ်းနဲ့ NHK သတင်းဌာနက ကိုသီဟသွေးတို့က ပင်တိုင်ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 28, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ စကားဝိုင်းများ, မြန်မာရေးရာ
အရပ်ဘက် အစိုးရသစ် နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး
မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲမှာ မတရား မှုတွေ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ရှိနေ ပေမယ့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို တာဝန် ယူရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ တရားရုံး စတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ဖက်က ဒီဖြစ်ရပ်တွေ အပေါ် ထိထိ ရောက်ရောက် အရေးယူ ကိုင်တွယ်တာ အားနည်းတယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန် ပြောဆို မှုတွေ ကျယ်ပြန့် လာနေ ပါတယ်။
စစ် အုပ်ချုပ်ရေး အောက်မှာတော့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အားနည်း ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့်၊ အရပ်သား အစိုးရ တက်လာတဲ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ခေတ်မှာ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် အခွင့် အလမ်းကောင်းတွေ ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ၊ အကဲစမ်း စိန်ခေါ်ချက်တွေ ဘာတွေ ရှိနေလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ် ဆွေးနွေး ထားပါတယ်။
ရှေနေကြီး ဦးအောင်သိန်း၊နဲ့ မြန်မာ သတင်း ပညာ သိပံ္ပက ဦးစိန်ဝင်းတို့က ပင်တိုင် ဆွေးနွေး ထားပါတယ်။
အိမ်အကူ မိန်းကလေးနှစ်ဦးဖြစ်ရပ် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖြေရှင်းပုံ
အိမ်အကူ မိန်းကလေး နှစ်ဦး ဖြစ်ရပ် လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
အိမ်အကူ လုပ်သား မိန်းကလေးငယ် တွေကို အိမ်ရှင် တွေက နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းပြီး လစာ မပေးဘဲ နှစ် အတော်ကြာ ခိုင်းစေ ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်က ဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ အပေါ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်ပုံ အပေါ် အမြင် တွေကို ဆွေးနွေး ထားပါတယ်။
ပင်တိုင် ဆွေးနွေးသူ တရား လွှတ်တော်ချုပ် ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းသန်းဦးနဲ့ လူ့အခွင့် အရေး လှုပ်ရှားသူ ဦးဇော်ရန်း တို့နဲ့ အတူ သောတရှင်တွေ ပါဝင် ဆွေးနွေး ထားကြ တာပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 25, 2016 No comments:
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟာ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် တဦး အနေနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် အနောက် အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ ဆီကို ခရီးထွက် ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ ဒီနိုင်ငံကြီး တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အပေါ် သောတရှင်တွေ ဘယ်လို နားလည် သလဲ ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်း သာယာ ၀ပြောရေးမှာ ဒီနိုင်ငံ ကြီးတွေ အနေနဲ့ အဓိက အခန်း ကဏ္ဍက ရှိနေတယ်လို့ လက်ခံထား ကြပါ သလား ဆိုတာ ပင်တိုင် ဆွေးနွေး သူတွေ ဖြစ်တဲ့ တချိန်က အဝေးရောက် ညွှန့်ပေါင်း အစိုးရရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ၊ တကောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာမှု အဖွဲ့ တည်ထောင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးမြင့်အောင် တို့နဲ့အတူ သောတရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆွေးနွေး ထားပါတယ်။